China PE fanary Niosh nankatoavin'ny vovoka FFP2 fiarovana nosy saron-tava N95 mpikirakira taovam-pisefoana Nose Mask miaraka amin'ny mpanamboatra valve sy mpamatsy | AKF Medical
PE Disposable Niosh nankatoavin'ny Vovoka FFP2 fiarovana ny sazy mason-koditra N95 mason-tava respirator orona
Lohatenin'ny vokatra ： PE azo ampiasaina Niosh nankatoavin'ny vovoka FFP2 fiarovana saron-tava orona N95 mpikirakira taovam-pisefoana orona miaraka amin'ny valve
Loko: fotsy sy mavo
Fitaovana: 3 Lay tsy misy tenona SPP + MB + SPP tsy misy tenona
Fenitra: GB2626-2006 KN95
Kilasy fiarovana: KN95 = N95 = FFP2
Taratasy fanamarihana: CE EN149 FFP2
Isan'ny fonosana: olona 20 / boaty, boaty 20 / ctn
Endrika: endrika 3D Cup
FFP2 Security Nose Mask N95 Partulateate Respirator Nose Mask miaraka amin'ny Valve (FDA Registrement, European FFP2, CE EN149), Safe Mask Sarom-piarovana, Air Filtration Anti Dust Mask, Saron-tava sivana azo ampiasaina
Saron-tava KN95 azo ovaina KD. Kilasy voasoratra anarana 1 an'ny FDA, fenitra eoropeanina FFP2 CE EN 149: 2001 + A1: 2009, ary ny fenitra sinoa KN95 GB2626-2006.
Sarona amin'ny saron-tava fiarovana ny tarehy ho an'ny 95 farafaharatsiny fahombiazan'ny filtration amin'ny sombin-tsolika tsy misy solika. Saron-tsofina ahazoana aina maivana sy mavesatra maivana miaraka amin'ny tadivavarana ary tadim-borona azo ovaina mba hahazoana antoka sy tombo-kase.
Famolavolana 5-ply vaovao, misy polypropylene mitambatra 40g (SMS) tsy tenona + 40g landihazo rivotra mafana + 25g BFE95 miempo mitsoka tsy voatenona + 25g BFE95 miempo notsofina tsy vita tenona + landihazo miorina amin'ny hoditra 25g Mety tsara hampiasaina amin'ireto orinasa manaraka ireto : Trano varotra, famolavolana sy fanamboarana, fanodinana sakafo, fiarovana ara-tsakafo, fanamboarana ankapobeny, fotodrafitrasa mavesatra, harena ankibon'ny tany, solika sy gazy, fitaterana. Miady ho an'ny coronavirus vaovao sy COVID-19, tsy natao hampiasaina amin'ny fitsaboana!
Famolavolana sy fanamboarana, fanodinana sakafo, fiarovana ara-tsakafo, fanamboarana ankapobeny, fotodrafitrasa mavesatra, harena ankibon'ny tany, solika sy gazy, fitaterana sns.
Maivana amin'ny fananganana ary mifanaraka tsara amin'ny tarehy mba tsy hiova mandritra ny fihetsehana.
Fitaovana fisoratana anarana ao amin'ny kilasy FDA. Notsapaina ary nihaona tamin'ny Standard European FFP2 CE EN 149: 2001 + A1: 2009. Mifanaraka amin'ny fenitra sinoa KN95 GB2626-2006.
Manaraka: 2020 4-layer Saron-tava FFP2 miaro amin'ny rivotra avo lenta FFP2 miady amin'ny vovoka Maska manohitra vovoka